नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : स्वर्ग जस्तो देश हेर्दा हेर्दै नर्क नै बनाए पापीहरुले !
स्वर्ग जस्तो देश हेर्दा हेर्दै नर्क नै बनाए पापीहरुले !
फाँसीमा झुन्ड्याउनु पर्ने अपराधीको जन्मोत्सब मनाइने देश । जन्मोत्सब मनाउन र चाकडी बजाउन हानाथाप गर्ने स्वार्थी, हरामी, अबसरबादी जमात भएको देश । एउटा निर्दोस शिक्षकलाई हातखुट्टा बाँधेर, घाँटी रेट्दै, गोली हानी हत्या गर्दा नबोल्ने नामर्द हिजडाहरु भएको देश । स्वर्ग जस्तो देश नेपाल हेर्दा हेर्दै नर्क नै बनाए पापीहरुले । के भन्नु र खोइ !!